Bislr: OS marketing marani-tsaina | Martech Zone
Bislr: OS Marketing ho an'ny manan-tsaina
Zoma, Septambra 13, 2013 Douglas Karr
Bislr dia nandefa ny fampiharana vaovao azy ireo, Autopilot, izay manambatra ny SaaS drag and drop marketing automation system miaraka amin'ny ankamaroan'ny fiasa amin'ny sehatra automatique marketing automatique. Izy io dia rafitra mora vidy izay toa mihoatra ny sasany amin'ireo mavesatra mavesatra indrindra amin'ny indostria miaraka amina interface madio kokoa ary fampidirana sy endrika matanjaka kokoa. Ao anatin'izany ny automatisation marketing, ny CRM fampidirana, ny mailaka marketing, ny pejy fipetrahana, ny fitorahana bilaogy, ny fitiliana A / B, ny fitantanana atiny ary ny valiny ary ny fanadihadiana marina.
Misy antsipiriany momba ny lafin-javatra manan-danja amin'ny Bislr:
Taranaka mitarika sosialy - Makà fahana amin'ny fotoana tena izy, izay milaza aminao ny fifandraisan'ny prospect amin'ny tranokalanao sy ny zavatra navoakany tao amin'ny Twitter sy LinkedIn. Ampifandraiso amin'ny rafitra CRM tianao indrindra (Salesforce, NetSuite) ity fampahalalana ity. Makà saina izay ilainao hanafainganana ny vola miditra.
Pejy manjavozavo - Tsy misy IT na coder takiana amin'ny Responsive Design namboarina. Andramo ny lohateny sy ny sary samihafa ary fantaro izay mandeha. Miaraka amin'ny Bislr, ny fanandramana A / B dia tsy safidy lafo - mahazatra io. Araho ny valiny amin'ny alàlan'ny fampielezan-kevitra na amin'ny pejy fitodiana.
Fanentanana Webinar - Fampidirina miaraka amin'ny GoToMeeting izay mifaninana amin'ny vahaolana automatisation marketing avo lenta izay mitentina $ 150k no ho miakatra. Ampitomboy ny fisoratana anarana amin'ny pejin-tranonkala fitobiana webinar misy marika mipetraka eo amin'ny tranokalanao fa tsy azy ireo.
Fanentanana fitarihana - Mora ny manoratra ny fampielezankevitra fitarihana voalohany anao mora foana. Miaraka amin'ny fitaovana mandroso izay azo antoka fa tsy ho tavela any aoriana ny firaka.
Toerana fanentanana - Fitaovana drag-and-drop dia mamela anao hamorona tranokala ilainao fa tsy mampiditra IT. Ary ny tranokalan'ny fampielezana noforoninao dia feno amin'ny famolavolana mamaly, manome azy ho an'ny mpanjifanao sy ny mpanjifa amin'ny telefaona finday sy tablette.
Fiantso-na-hetsika-mavitrika - Manamboara antso-ho-hetsika misy fiantraikany be. Mametraha iray isaky ny faran'ny lahatsoratra bilaogy rehetra. Avadiho ho lasa mpitarika ny prospect Bislr Intelligent Marketing OS, amin'ny fotoana tena izy.
Voaro amin'ny alàlan'ny kabary malalaka sy ny gazety malalaka ve ny media sosialy?
Izay tsy renao tamin'ny Apple Keynote: iBeacons